शिव श्रेष्ठको डेब्यू स्मृति : सुटिङ सेटबाट तीन पटक भागेको थिएँ- फिचर - कान्तिपुर समाचार
शिव श्रेष्ठको डेब्यू स्मृति : सुटिङ सेटबाट तीन पटक भागेको थिएँ
'म आफै हिरो बनेको होइन, मलाई प्रकाश थापाले हिरो बनाइदिनुभएको हो'
जेष्ठ ३२, २०७७ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — विराटनगरको जलजला हल नजिकै थियो, शिवसुन्दर श्रेष्ठको घर । काठमाडौंको किलागल किसी गल्लीमा जन्मेका उनी अध्ययनको सिलसिलामा पुगेका थिए विराटनगर । महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा आईए पढ्दै थिए । यो २०३७ को कुरा हो ।
हलनजिकै भएकाले नयाँ फिल्म लाग्नेबित्तिकै उनी साथीहरुसँग फिल्म हेर्न पुगिहाल्थे । प्रकाश थापा निर्देशित 'सिन्दुर' फिल्म उनले त्यहीँ हेरेका थिए । उनलाई फिल्म असाध्यै मन परेको थियो । फिल्म हेरिसकेपछि साथीहरुसँगै शिव क्यारम खेल्नतिर थाले ।
क्यारम खेल्दै गर्दा एकजना साथीले उनीहरुलाई निर्देशक थापा पनि जलजलामा आएको खबर गरे । साथीहरु सबै थापालाई हेर्न आतुर भए । शिवले मानेनन् । किनकि उनी क्यारममा जितिरहेका थिए । जित्नेले समोसा खान पाउँथ्यो । त्यसैले उनको ध्यान जितेर समोसा खानेतिर नै थियो । साथीहरु बीचमै खेल छोडेर निर्देशक थापालाई भेट्न हलतिर दौडिए । एक्लै कसरी क्यारममा खेल्नु, शिव पनि साथीहरुलाई पछ्याउँदै हल पुगे ।
निर्देशक थापा भीडले घेरिएका थिए । पान चपाउँदै गरेका निर्देशक थापालाई देख्नेबित्तिकै शिवको मुखबाट अचानक फुत्कियो, 'दाय नमस्ते तपाईंलाई बधाई छ ।'
'मलाई कसले नमस्कार गरेको ?' भन्दै प्रकाशले भीडबाट आवाज दिए । परिचय खुलाएपछि उनले शिवलाई तलदेखि माथिसम्म नियाले । भोलिपल्ट ११ बजे भेट्न बोलाउँदै प्रकाश छुट्टिए । भोलिपल्ट निर्धारित समयमा शिव प्रकाशलाई भेट्न हल पुगे । घण्टौं कुरे तर प्रकाश आइपुगेनन् । घर फर्के । भोलिपल्ट फेरि त्यही समयमा हल पुग्दा भने प्रकाशसँग उनको भेट भयो । शिवसँग भेट्ने भनेको दिन उनी बुवाको आँखा जँचाउन गएका रहेछन् । दोस्रो भेटमा शिवले प्रकाशलाई सोधिहाले, 'दाइ तपाईंले मलाई किन बोलाउनु भएको ?'
त्यसदिन पनि प्रकाशले शिवलाई तलदेखि माथिसम्म नियाले । अनि भने, 'भाइ फिल्ममा खेल्ने हो ?'
शिवले सिधै अस्वीकार गरे, 'मलाई अभिनय गर्न आउँदैन दाइ । म गर्दिनँ फिल्म ।' उनको जवाफ सुनेर प्रकाश मात्र मुस्कुराइरहे । 'अन्त्यदेखि सुरुसम्म' भन्ने पुस्तकको कथामा फिल्म बनाउन लागेको भन्दै उनले शिवलाई गोरखापत्र हेर्न भने । काठमाडौं फर्केपछि उनले गोरखापत्र हेरे । त्यसमा फिल्मका लागि आवेदन खुल्ला गरिएको थियो । उनले खलपात्र भूमिकाका लागि आवेदन दिने सोचे । आवेदन दिन तत्कालीन शाही नेपाली चलचित्र संस्थान, बालाजुमा गए ।
त्यहाँ उनलाई तीन किसिमका डायलग दिइयो । तयारीका लागि १५ मिनेट समयावधि । क्यारिकेचर गर्न माहिर शिवले मज्जाले डायलग बोलिदिए । त्यसपछि खलपात्र बन्न गएका उनी फिल्मको 'हिरो'मा छनौट भए । शिवका अनुसार त्यतिबेला भुवन केसी, शम्भुजित बास्कोटाले पनि उनीसँगै आवेदन दिएका थिए । त्यो फिल्मको नाम थियो 'जीवनरेखा' । जहाँबाट सुरु भयो शिवको अभिनय यात्रा । ‌'मैले जीवनमा थुप्रै फिल्ममा काम गरेँ तर आज पनि पहिलो फिल्मका अनुभंति विशेष लाग्छ', यो फिल्मसँग जोडिएका रमाइला र अविस्मरणीय किस्साहरु अझै उनको स्मृतिमा ताजै छ ।
यो फिल्ममा शिवलाई 'हिरो'को भूमिका दिइए पनि खासमा उनी खलपात्रकै रुपमा देखिन चाहन्थे । त्यसैले सुटिङ सुरु भइसक्दासम्म पनि उनले पटकपटक निर्देशकसँग अनुरोध गरेका थिए, 'दाइ मलाई गुन्डाको रोलमा लिनुस् । फाइट सिनमा लिनुस । हिरो त सक्दिनँ ।' तर निर्देशक थापाले मानेनन् । मुस्कुराउँदै जवाफ फर्काउँथे, 'मेरो नाम प्रकाश थापा हो । म छु नि, तिमीले मलाई पछ्याउनू ।'
यसरी फिल्म 'जीवनरेखा'को सुटिङ सुरु भयो । फिल्मकी अभिनेत्री थिइन् मिनाक्षी आनन्द । मिनाक्षी छेउमा आउनासाथ शिव थरथर काँप्थे । २३ वर्षीय शिवले त्योबेला न कुनै अभिनयको तालिम लिएका थिए न अभिनय गर्ने सोचेका थिए । अभिनय गर्न गाह्रो पर्‍यो उनलाई । त्यसैले आफूले अभिनय गर्न नसक्ने भन्दै सुटिङबाट तीन पटक भाग्दाको क्षण आज पनि शिवको मानसपटलमा ताजै छन् । 'सुटिङमा के गर्नी, कसो गर्नी थाहा थिएन। त्यो फिल्मबाट म तीन चोटि भागेको थिएँ,' नोस्टाल्जिक हुँदै शिवले सुनाए ।
निर्देशक थापा हौसलासहित उनको ढाड थपथपाउँथें । तर, सुटिङ सुरु गर्न लाग्दा शिव 'सक्दिनँ' भन्दै पछाडि हट्थे । एकदिन निर्माण टिम पोखरामा अन्य कलाकारको सुटिङ गर्दै थियो । त्यसदिन शिवको सुटिङ थिएन । टिम पोखराको अन्य ठाउँमा सुटिङ गर्न गएको मौकामा शिवले काठमाडौंको बस समाते । टिमले फेरि बोलायो, उनी पोखरा फर्के ।
त्यसपछि फेरि काठमाडौंमा सुटिङ भइरहँदा भागेर विराटनगर पुगे । निर्माण टिमले त्योबेला पनि फकाइफुलाइ उनलाई बोलायो । त्यसपछि फेरि काठमाडौं फर्के । तेस्रो पटक फेरि काठमाडौंको सुटिङ छोडेर दार्जीलिङ भागे । 'अब त म फिल्म खेल्दै खेल्दिनँ भनेर दार्जीलिङ भागेको थिएँ । साथीसँगै दार्जीलिङ घुम्ने योजना थियो,' उनले पुराना दिन सम्झे । त्यतिखेर स्वर्गीय गौरीकार मैनाली प्रोडोक्सन कन्ट्रोलमा थिए । चेतन कार्की प्रोडोक्सन चिफ । दुवैले शिवलाई सम्झाइबुझाइ काठमाडौं फर्काए ।
'अरु भूमिका दिनुस् गर्छु तर मुख्य भूमिका गर्दिनँ,' काठमाडौं फर्केपछि उनले सर्त राखे । त्यतिखेर आँखाभरि आँसु लिँदै प्रकाशले भनेका कुरा आज पनि सम्झन्छन् उनी, 'हेर शिव दुनियाँ मान्छेले मलाई हिरो हुन सोर्सफोर्स लगाए । तर मैले तिमीलाई चुनेँ । तिमीमा जे छ तिम्रो आँखामा छ ।'
सुटिङ छोडेर भागिरहँदा पनि टिमले शिवलाई यसरी बोलाइरह्यो । उनीहरुले नबोलाएका भए आज आफू यो स्थानमा नपुग्ने शिव सुनाउँछन् । 'त्यतिखेर उहाँहरुले मलाई नबोलाउनु भएको भए आज म शिव श्रेष्ठ हुन्थिन् होला,' उनले भने, 'म आफै हिरो बनेको होइन, मलाई प्रकाश थापाले हिरो बनाइदिनुभएको हो । आखिर उहाँले मलाई कसरी बोल्ने, कसरी हिँड्ने, कसरी हाँस्ने, कसरी रुने सिकाउनुभयो ।'
यसरी फिल्मको काम सक्न बाध्य भए उनी । 'तिम्रो भागको जति खिचाइमा खर्च भएको छ त्यति तिमीले बेहोर्नुपर्छ भन्दै मलाई उहाँहरुले तर्साउनु पनि भयो । त्यसपछि त म फिल्म गर्न बाध्य भएँ,' उनले सुनाए ।
फिल्म तयार भयो । फिल्मको ट्रायल सो उनीहरुले बालाजुमै हेरे । त्यो ट्रायल सो पनि उनी कहिल्यै बिर्सँदैनन् । 'भाइलाई कस्तो लाग्यो फिल्म ?' मौन मुद्रामा रहेका शिव प्रकाशको प्रश्नले झस्किएका थिए । 'मैले सोच्दै नसोचेको कुरा पर्दामा देखें । स्क्रिनमा साँच्चै मैले नै अभिनय गरेको हो त भनेर म छक्कै परें,' उनले ट्रायल सो सम्झँदै भने, 'त्यसपछि मैले उहाँको गोडा छोएँ ।'
त्यसपछि शिवले कास्टिङमा आफ्नो नाम छुटेको गुनासो पोखे । 'हिरोको नाम पनि छुट्छ' भन्दै प्रकाशले फेरि कास्टिङ रिप्ले गर्न लगाए । त्यहाँ कलाकारको नामहरुमा शिव श्रेष्ठ पनि थियो । 'मेरो नाम त शिवसुन्दर श्रेष्ठ हो' शिवले यस्तो भन्नेबित्तिकै प्रकाशले थपिहाले, 'सुन्दर त तिमी छँदैछौ अबदेखि तिमी शिव श्रेष्ठ ।' त्यस दिनदेखि उनी दर्शकमा शिव श्रेष्ठको नामले चर्चामा आए ।
शिवले कहिल्यै फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने सोचेका थिएनन् । उनको एउटै सपना थियो पाइलट बन्ने । पछि इन्स्पेक्टर बन्ने सोचेका थिए । 'मामा द्वारिका श्रेष्ठ डीएसपी हुनुहुनथ्यो । उहाँले पहिला असई बन अनि इन्सपेक्टर बनाइदिन्छु भन्नु भएको थियो। तर म सुरुमै इन्सपेक्टर बन्न चाहन्थें, ' उनले भने, '६ महिनापछि मात्र इस्पेक्टर बन्ने भएपछि म आर्मीमा गए । ब्रिटिस क्याम्पमा परीक्षा थियो । परीक्षमा नाम निकालें । कलाकार नभएको भए आज म लाहुरे हुन्थें होला ।' प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०७७ १४:३३
लकडाउनमा 'नोस्टाल्जिक' कलाकार
जेष्ठ २९, २०७७ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — लकडाउनको समय अधिकांश कलाकारले व्यस्त जिन्दगीबाट फुर्सद पाए । पुराना दिनहरु केलाउने समय पनि पाए । अधिकांशले लकडाउनको समय परिवारसँग बिताए । धेरैले पुस्तक पढ्न, फिल्म हेर्न गज्जबको फुर्सद पाए ।
अभिनेत्री केकी अधिकारीले भने यी सबसँगै फुर्सदको यो समयलाई सरसफाइका लागि प्रयोग गरिन् । यही बहानामा हराएका सामानहरु खोज्दा पुरानो एल्बम भेट्टाइन् । जसले उनलाई बाल्यकालमा फर्काइदियो । एक्कासि नोस्टाल्जिक बनाइदियो ।
'सरसफाइको काम गर्दै थिएँ । आफ्नो हराएको कुरा खोजौं भन्ने भयो । अरु बेला व्यस्त भइन्थ्यो । त्यतातिर ध्यान पनि जाँदैन थियो । अहिले लकडाउनले फुर्सद हुँदा थाहा भयो जीवनमा धेरै चिजहरु हराएका रहेछन्,' उनले सुनाइन् ।
भेटिएको पुरानो एल्बममा विद्यालयको रिपोर्ट कार्ड, सर्टिफिकेट थियो । ती कुराहरुले उनलाई विद्यालयका पुराना दिनमा पुर्‍यायो । बाल्यकालका ती अविष्मरणीय क्षणमा पुर्‍याइदियो जहाँ उनले आफ्नो मन मिल्ने साथी भेटेकी थिइन् । युक्ता प्रधान, उनीसँग केकीले कक्षा १ देखि पाँचसम्म सँगै पढेकी थिइन् । कक्षा पाँचपछि युक्ता अर्को विद्यालय गइन् ।
अचानक सरसफाइ गर्दै जाँदा केकीको हातमा युक्ता र उनको तस्बिर पर्‍यो । त्यसपछि उनीसँग बिताएको बाल्यकालका सम्झना झलझली उनको आँखा अगाडि नाच्न थाल्यो । हुन त केकीलाई बाल्यकालका अन्य यादहरु खासै सम्झनामा छैन । तर, युक्तासँग बिताएको त्यो रमाइला यादले भने लामो समय केकीलाई सताइरह्यो । त्यसैले केकीलाई लाग्यो, लकडाउन युक्तालाई खोज्ने उपयुक्त समय होला ।
केकी अधिकारी बाल्यकालकाे तस्बिर नियाल्दै
'अरुबेला समय छैन भन्ने बहाना भइरहन्थ्यो,' केकीले भनिन्, 'अब त २० वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । के कस्तो परिवर्तन भयो होला, फेसबुकमा उनलाई खोज्न थालें । म्युचल फ्रेन्डले गर्दा साथीलाई फेसबुकमा भेटें । विद्यालयको नाम पनि परिवर्तन गरिसकेकी रहिछिन् ।'
फेसबुकमा दुईले खुब कुराकानी गरे । सेलिब्रेटी भइसकेकी साथीले आफूलाई नचिन्ने पो हो कि भन्ने शंकाले गर्दा इन्देणी(युक्ताको नयाँ नाम)ले पनि केकीसँग कहिल्यै बोल्न प्रयास गरेकी रहिनछिन् । 'सबैभन्दा दु:ख लाग्दो कुरा हामी अनुमान गर्छौं नि त । त्यही अनुमानमा सम्बन्ध अलमलिएको हुन्छ,' केकीले सुनाइन् ।
अभियनतिर व्यस्तता बढेपछि अभिनेत्री केकीले धेरै सम्बन्धहरुसँग दूरी बढेको अनुभव गरेकी छिन् । स्नातक अध्ययन गर्दै गर्दा केकीले फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुन् । हरेक कार्यक्रममा उपस्थित हुने केकी त्यसपछि भने बिस्तारै साथीहरुले बनाएको कार्यक्रम सहभागी जनाउन भ्याइनन् । कामलाई प्राथमिकता दिँदा साथीहरु छुटिँदै गए । 'जिन्दगीमा कति कुरा पाउँदै जाँदा कति कुरा छुट्दै जाँदो रहेछ । त्यतिबेला त्यो महसुस हुँदैन । तर अहिले याद गर्दाखेरी पाउनु/गुमाउनु भन्दा पनि साथीहरुसँग ती यादहरु मैले बनाउन पाइनँ भन्ने कुराले मन अमिलो हुन्छ,' उनले सुनाइन् । त्यसैले केकीले वर्षौंपछि आफ्नो मिल्ने साथीलाई लकडाउनमा खोजिन् । भेट्टाउँदाको खुसी अझै ताजै छ । आफ्नो युट्युब अकाउन्टमा युक्तासँगका ती दिनहरु सम्झँदै भिडियोसमेत बनाएकी छिन् ।
बाल्यकाल अन्तरमुखी स्वभावकी थिइन् केकी । 'हेर्दा सोझी देखिए पनि मनको बाठ्ठी थिएँ । विद्यालयको अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि अगाडि नै थिएँ । जहिल्यै पनि पहिलो हुनुपर्छ भन्ने सोच राख्थें । तर अहिले त्यो चिजहरुले जिन्दगीमा खास अर्थ राख्दैन रहेछ भन्ने महशुस भएको छ,' केकील भनिन् ।
सानोमा दयाहाङ राई साथीहरूसँग
लकडाउनले केकीलाई मात्रै होइन थुप्रै कलाकारलाई बाल्यकालका दिनहरुमा पुर्‍याइदियो । कलाकारहरु राजेश हमाल, दयाहाङ राई, आर्यन सिग्देल, स्वस्तिमा खड्का, लक्ष्मी बर्देवालगायत थुप्रै कलाकारले नोस्टाल्जिक हुँदै बाल्यकालका तस्बिरहरु सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट पनि गरे ।
अभिनेता सिग्देलले केही दिनअघि फेसबुकमा आफ्नो बाल्यकालको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै लेखेका छन्, 'एकादेशमा मिस्टर हरिश सिग्देल ।' विद्यालय पोसाकको उक्त तस्बिर पक्कै अभिनेता सिग्देललाई पनि विद्याल जीवनमा पुर्‍याएको हुनुपर्छ ।
त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अभिनेता दयाहाङले पनि आफूले एसएलसी परीक्षा दिँदाको तस्बिर सार्वजनिक गरेका थिए । 'एउटा सुन्दर सम्झना..एसएलसी परीक्षा सकिएपछि साथीहरू सरोज राई र दिवान राईसँग म अन्नपूर्ण माविको प्राङ्गणमा । पछाडि ट्याम्के डाँडा, त्यसैको मुनि मैले नै छेकेको मेरो गाउँ,' उनले लेखेका छन्, 'अहिले एसईई परीक्षा रोकिएको यो अवस्थामा तपाईं सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू शारीरिक र मानसिक रुपमा तयार रहनुहोला । किनभने तपाईंहरूले एउटा युग हाँक्नुछ ।'
अभिनेत्री लक्ष्मी बर्देवा लकडाउनले बाल्यकालका स्मृतिहरु ताजा गरेको बताउँछिन् । 'मलाई बाल्यकालमा कसैले नियन्त्रण गर्न खोजेको मन पर्दैन थियो,' उनी सम्झिन्छिन्,'म आमाको कुटाइ खाइरहन्थें । चकचके थिएँ । जिज्ञासु थिएँ । सानो कुरा पाएँ भने चित्तबुझ्दो जवाफ नआएसम्म उत्तर खोजिरहन्थें । पढाइ राम्रै थियो ।'
उनी बहिनीहरुको निकै हेरचाह गर्थिन् । वास्ता गर्थिन् । आफू जता गए त्यतै लिएर हिँड्थिन् । तिहारमा पिङ खेलेर लड्दाको घट्ना उनी कहिल्यै बिर्सन्नन् । 'म सानोमा गौरीघाट संगमचोक बस्थें । त्यो बेला दशैंमा पशुपतिमा पिङ हाल्थ्यो,' उनले सम्झिन्, 'मलाई पिङ एकदमै मनपर्ने । पिङबाट लडेर दुर्घटना भएको खबरहरु सुनेर आमा पिङ खेल्न जान दिनुहुन्थेन । तर म दुई बहिनीहरु कल्याणी र आश्विनीलाई लिएर पिङ खेल्न पुगिहाल्थें ।'
लक्ष्मी बर्देवा सानी छँदा
उनीहरु पिङ छेउ नपुग्दै त्यसदिन बाँदरले उनीहरुलाई आक्रमण गर्‍यो । बाँदरको आक्रमणबाट बच्न खोज्दा लडेर बहिनीलाई चोट लाग्यो । 'त्यतिबेला आमाले कुटाइ खाएँको थिएँ । उहाँले त नजा भन्नु भएको थियो नि त,' उनी पूराना दिन सम्झिन्छिन् ।
आमाले पिङ खेल्न जान नदिएपछि घरको छतमा उनले लुगा सुकाउने डोरी झुण्डाएर पिङ बनाइन् । सबै बहिनीहरु त्यसमा झुण्डिएर पिङमा मच्चिन्थे । तर लक्ष्मी पालोमा त्यो डोरी चुँडिएर टाउको फुटेको थियो ।
'पिङ जस्तो बनाएर एक हातले त्यो डोरी समातेर तुर्लुङ्ग झुण्डिन्थ्यौं,' उनले सम्झिइन्, 'म झुण्डिएको समयमा डोरी चुँडिएर मेरो टाउको फुटेको थियो । धन्न बहिनीहरुलाई केही भएन । त्यो क्षण सम्झँदा अहिले हाँस उठ्छ । साँच्चै कति रमाइला थिए ती बालापन !'
प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७७ १५:२२
श्रीमानको शव साउदीमा छ, ल्याउने कसरी ?
एउटा विद्रोही अनुहार